Soosaarayaasha Alaabta - Shirkadaha Alaabada Shiinaha & Warshad
Qalabka Animal Plush Dog Toy wuxuu Sameeyaa Qalabka Ciyaarta ee Cunista shimbiraha
Noocyada sharraxaadda Kuwani toy eey dheeraad ah oo bixiya saacado xiiso leh oo qaylo leh iyada oo aan loo baahnayn nadiifinta qashinka! Qalabkan dheeliga ah ee loo yaqaan 'toyh' ayaa waxaa ku jira 3 astaamo shimbir oo qosol badan oo si kalgacal leh nolosha loogu keenay iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha ugu tayada wanaagsan ee adkeysiga u leh xayawaannadaada. Shimbirahaasi waxay caajis ku hayn doonaan iyagoo ku madadaalinaya qashinkaaga naqshadahooda xiisaha leh iyo dhawaqyada sasabaya. Faahfaahinta Midabka: Buluug / Cagaar / Madow Waxyaabaha: Dareenka + Cadka miisaanka alaabta: 580g / 1.27l ...
Ball Dog feed Dog Toy Doy Toy Daweeye Qeybiyaha Cuntada
waxyaabaha caagga ah ee deegaanka u roon ee jawiga ku habboon, oo ay soo saaraan soosaarayaal tayo sare leh, ma xallin karaan oo keliya dhibaatada quudinta eeyga, laakiin sidoo kale waxay la falgalaan eeyga si ay uga nastaan ​​caajiska xayawaanka.
Ku daawee Launcher eeyaha Cunnooyinka Quudiyaha Shooter Catapult Alaabta
Qaabka xariiqa luuqada leh wuxuu kufiican yahay adeegsadayaasha inay isticmaalaan waxayna hagaajinayaan raaxada isticmaalka. Hawlaha quudinta xiisaha leh ee 'catatapult' ayaa si wax ku ool ah ula falgala xayawaanka rabaayadda ah.
Tilmaamaha Astaamaha Dameeraha alaabta carruurtu ku ciyaaraan eeyaha ee xiisaha badan, 3 dameerro oo go'an! Ka samaysan bey'ad-saaxiibtinimo, la dhaqi karo, isla markaana lagu daray premium. Alaabta lagu ciyaaro eeyaha dheeriga ah ayaa kaa caawin doona inaad ilaaliso ciridka eeygaaga oo aad nadiifiso ilkaha. Waad iska ilaalin kartaa eeyahaaga si ay u calaashadaan alaabta gurigaaga ama kabahaaga. Eyga quruxda badan ee quruxda badan oo loogu talagalay midabyo dhalaalaya iyo muuqaal dameer dhalaalaya, waxay si weyn u soo jiidayaan eeyahaaga oo ay ku maaweelinayaan! Qeexitaannada Midabka: Cawl / bunni / Waxyaabaha Dhexdhexaad ah: Dareer + Cabbirka Cotton: 24cm * 19cm Culayska alaabada: 30 ...
Ey Snuffle Mat Dog urinta suufka Rugta Quudinta
Astaamaha Sharaxa 1. Saanqaadahan wax lagu shiido ayaa u ekeysiinaya ugaarsiga cuntada ee cawska iyo beeraha, kaas oo ku qanciya eeyaha xiisaha dabiiciga ah isla markaana xoojiya dareenka sare ee urta. Kor u qaad jimicsi maskaxeed iyo jireed adoo yareynaya culeyska fekerka. Waa alaabta caruurtu ku ciyaaraan ee had iyo jeer soo jiita xayawaankaaga isla markaana ku mashquuliya halkii ay ka burburin lahaayeen qalabka guryaha. wax qarsoon ...
Caruurta Ey Xarig Cuf Xanjo Maro Lafta Qaab Jiita
Astaamaha Sharaxaad Aad ayey muhiim u tahay in la qaato tababar ku saabsan firfircoonida iyo waxqabadka eeyga. kubbadda tababarka loo dejiyay gaar ahaan waxay ku habboon tahay eeyaha firfircoon ee xun. Toy toy dog ​​this is multifunctional, ku fiican yahay soo qaadashada iyo isdhexgalka eeygaaga. Toy Dog toy ball ball waa wax ka badan xayawaannada is-madadaalada iyo kubbadda toy toy interactive, Waxay noqon kartaa toy toy, sidoo kale waxay noqon kartaa ilkaha toy nadiifinta. Kuwani caruusadaha caruusadda ee qaniinyada xayawaanku waa u fiican yihiin jiidaha dagaalka waxayna ku raaxeysan doonaan eyga saacado badan. Iska ilaali ...
Qalabka Cunnooyinka Kirismaska ​​Eeyaha ee Calanka Kubadda Xadhig
Tilmaamaha Tilmaanta 1. Sii eeygaaga firfircoon waqtiga madadaalo ee uu jecel yahay qalabka eyga ee ciida masiixiga ah. Casaan iyo cagaar waa midabyo matalaya, oo ka buuxa jawiga Kirismaska. 2.Ka caawi xoojinta xiriirka ka dhexeeya adiga iyo eeygaaga, dhis kalsoonida iyo sameynta tababarka adeeca. 3.Waxay yareysaa kala tagga walwalka, waxay kobcisaa dabeecada cunista saxda ah. 4.Masaasida ciridka iyo nadiifinta ilkaha eyga inta lagu jiro ciyaarta. 5.Caawinta xayawaanku waxay u weeciyaan dhaqanka qaniinyada xun. Tilmaamaha Midabka: Midabbada Midabada o ...
Xadhig Xadhig Xadhig Ball Dog Calaliso Alaabta Nadiifinta
Astaamaha Sharaxaad farabadan oo ah alaabada lagu ciyaaro eey eeyga aad ku ciyaareyso, walwal kama qabin inay cidlo noqon doonaan marka aadan agtiisa ama iyadu ag joogin. Qalabka caruusadan lagu xirxiray ayaa ka sameysan xadhig tayo sare leh oo cudbi dabiici ah, oo gebi ahaanba ammaan u ah xayawaanka guryaha lagu haysto. Guntin midab leh ayaa si fudud u soo jiidan doonta dareenka xayawaanka. Lafta buraashka gaarka ahi waxay ka caawisaa koritaanka caafimaad ee ilkaha iyo ciridka xayawaannada. Sooc Midabka: Harada Buluugga ah ee Buluugga ah: Xarig suuf tayo sare leh Cabbirka: A: 28cm / B: 38cm / C: 42c ...
Ilkaha Ilkaha Nadiifinta Xadhigga Xadhigga Xididdada Xirmooyinka Ilkaha Ilkaha
Astaamaha Sharaxaad Ku saabsan waxyaabaha ay carruurtu ku ciyaaraan eey yihiin alaabta lagu ciyaaro ee is-dhexgalka ah, qalabka lagu ciyaaro ee xargaha, alaabta lagu ciyaaro ee lagu calaaliyo, lafaha gunti, kubbadaha eyga. Dhammaantood waa kuwo soo jiidasho leh si ay ula kulmaan shuruudo kala duwan eeyahaaga. Si aad u qanciso rabitaanka xayawaanka, U ilaali ilkaha iyo ciridka xayawaanku inay caafimaad qabaan. Ka samaysan xadhig tayo sare leh oo cudbi ah, adkeysi badan leh, qaniinyo u adkaysanaya. Faahfaahinta Midabka: Waxyaabaha Midabada leh: Xarig tayo sare leh suufka miisaanka alaabada: 300g / 0.66lb 1. Intaa waxaa dheer, waan wada shaqeyn doonnaa ...
Butros Snuffle Mat Dog xujo Caruurta Alaabta Kaabash Gaabis ah
Tilmaamaha Tilmaanta 1. Cilmi baarista waxay muujineysaa in urinta 10 daqiiqo ay la mid tahay saacad ordaya. Digaaggan quudinta eeygan ayaa daadanaya tamarta eeyga isla markaana ka yareeya walbahaarkooda. Kaliya waxaad ku qarinaysaa cunnada fudud ee eygu jecel yahay ee geeska gogosha ciyaarta. Isku darka sirdoonka iyo gorgorrada ayaa u oggolaanaya eyda inay ilkaha ilko caddeeyaan markay wax cunayaan. Qalabka istcimaala ee eeyga isticmaalka badan ayaa kaa caawinaya inaad badbaadiso waqti iyo dadaal. 3-Kaabashkan loogu talagay baaquli-xayawaanku waa mid soo jiidasho u leh xayawaanka isla markaana kiciya xiisaha ...
Alaabada Eyga Is-dhexgalka Is-dhexgalka Jiilaalka Daaweynta Bixiye Quudinta Quudinta
Astaamaha Sharaxa 1. Qalabka carruurtan lagu daaweeyo ee dawadan ah ayaa eeygaaga mashquul ku ah inuu ciyaaro oo wuxuu ku abaal mariyaa daaweyn, taas oo dhacda markay la ciyaaraan eeyga si ay u wareegaan. Labanlaab sida quudinta qunyar socodka ah waxayna dhiirrigelisaa jimicsiga iyo cunno caafimaad leh. Naqshadeynta koobka nuugista ee awoodda leh, oo ku lifaaqan xabag adag (koollada waa la dhaqi karaa dibna loo isticmaali karaa), waxay nuugi kartaa boosas kala duwan mana fududa in la dhaco. 3.Dog daaweeyo qalabka wax lagu iibiyo ee ciyaaruhu wuxuu hoos u dhigi karaa xawaaraha quudinta eeyga, iska ilaali inaad ku ceejiso cunista fa aad u badan ...